Kaxeysa ee uu uu uu uu uu uu uu uu uu uu uu uu uu uu uu uu uu uu uu uu aqooneeyso.
Waxaad halkan tihiin:Guri > Products > Security > Taah>Gaalada xisah
Gaalada xisahWaxaa laga sameysaa da'aan oo 304, 316, 304 L, 316L. Sidoo kale waxaa lagu bixiyaa 1 × 7–7 iyo 1–7 iyo 1 × 19. Balalka caadiga ah waa 90 °. Gacmigu wax xumaado ma jiro. Mana dhibi doono xoolaha iyo shimbiro. Sidaas daraaddeed waxaa looga isticmaalaa sidii uu badbaadiyaa xayawaanka, wuxuuna ka dhigi kartaa aqoonta xayawaanka xayawaanka la'aan. Sidaasoo kale waxaa looga isticmaalaa shimbir ah si uu u noolaa si uu wanaagsan.
Guryaha Rope Mesh
Dadka khalkeedka ee ee khamiirka ah waa la xiriirta badan oo aad u isticmaaleysaa waxyaalooyinka soo socda:
Goobta daboolka ee goobta ah waxaa si uu socdaa dadka iyo xayawaanka lagu daboolayo. Intaas waxaa sidoo kale ee khalkaasu waa saameyn aad u taqaabsan, waa in loo leedahay, waxay u heli kartaa badbaadada weyn ee xayawaanka la xidhiidha oo dhibta dhibaatooyinka.
AISI 304 ama AISI 316 Shaqaadanu ee keelan ah ee ee khalka ah waxaa laga sameeyo dhismo la'aanta uu siiyaa dhiso sare iyo dhinaca sare. Waxay leeyihiin horayso oo wanaagsan iyo damaamaha, awooda badan oo dhashada ah oo dhashada ah. Intaas waxaa ka hor tagi karaa u jawaabta u dhacaysaa u dhacayso ah iyo dhibka kale.
Guryaha rhombic ee iskuulka ah waxay u ogolaanshiyaha sare ee la'aan la'aan la'aan. Muhiimkeeda waxyaabaha la xiriirta ah iyo dhinaca daaxi ah ayaa ka sii uu aqoonsanayaasha beerta iyo archifteystaha dunida oo dhan.
Cilmiga aawadeed ee uu caafimaad yahay cimuulka, si uu uu dhaqaalaha adag ee shuruudaha ah sida roob adag, haddii haddii warbixin. Sidoo kale waxaa la siiyaa horay sare ee UV, guriga iyo rugta, kuwaas oo ka ogolaansho 30 sano. Intaas waxaa laguma baahna masruufka ee khalka la'aan, daahirinta gaar ah kuma baahna.
Intaas waxaa dheer oo shirkadeeda ee shirkadeedka u bixinayo waa saaxiib ah, lacagta lacagta lacagta ah, la'aan lacag lacag karo. Intaas waxaa dheer oo dhinaca ee burburka ah ayaa u ogolaanshaha ka ogolaanshaha la’aan la’aanta la’aan la’aan la’aanta, iyo in la qaataa gaadiid ku saabsan iyo goobta.
Shirkada shaqada ah
Magaca ee ee ee ee ee ee ee u fudud ah.
L cable qaarka: dabooyinka AISI 304, 304L, 316 ama 316L.
L cable diyaamed: 1/8", 3/32", 5/64 ", 1/16" iyo 3/64.
I Meeshka furan: 1 "× 1", 1-1/2" × 1-1/2 ", 2" × 2 ", 3 "× 3" iyo 4" × 4.
L meesh: W: 20 mm to 120 mm; H: 20 mm to 120 mm.
Horey:Cidhibka ee la'aanta ee la'aaneysa
Heegaanka ka hortaga dhibaatooyinka ee kaalmada
DaryeelkaAhSi uu uu uu uu uu uu uu shaqeeyo u fiican ah iyo nolosha adeegga dheeraad ah, Waa in aanu qabatooyin qaarkood si aan ka horto dhibta ee khalka ee khalka. Waxyaabaha ee waxyaabaha si xaq ah ...
Sidee uu timaado u isticmaalaa xidhibka uu uu isticmaalaa?
Qiimo isticmaalka nolosha, shaqada ama deegaanka,Aawadeed da'aan la'aanta saleysaWaxaa saame weyn, tusaale ahaan xirfadda shalka caasimaad ee zooo, lacagta badbaada salegada, lacagta badbaadada sare, ...
Sidee loogu iibsaneysaa shalka wanaagsan?
Kuwa isticmaalayaasha badan waxay ka fikiran karaan sida uu u dooran karaan sameeyaasha dabiilka, markii ay doortaan biirka. Kuwa macaamilka uu tiirka iibsashada ma adag in iibsashada biirka, laakiin ...
Ku saabsan isticmaalka shaqadka
Sidoo kale waxaa la xiriirta xidhibka ee uu uu uu uu uu aad u badnaana, waana ka hadlin isticmaalka isticmaalka.Shaqadka, Aan wada fiirinn!1. Shabakadda shabakadda daboolka la xiriirta waxaa loo istic...
Gaalada ahQ235 waxaa laga sameysaa dabaalka karbon ee gaar ah oo lagu sameysaa guriga ee guri. Shalqidka ee daboolayda ee daboolka ah ma aha oo kaliya, laakiin waxaa ku yaal kala bixin xirfadeed.Shaqo...
Maxay uu uu xidhibka uu kuwoyso?
Waxbarashada uu uheyn uheyn ee uu uheyn ee uusan ah, Sida ugu horeyso salka la'aantaas waxaa ka mid ah saddex xirmood, bir, nikel, krominium, sida qayb kala duduwan ee dhaqaalaha, Markaasna waxey noqo...
Ciyaad la'aanta ee la'aanta ee la'aanta ee la'aanta ah
Biil la'aanta ee la'aanta ahShaqadkaWaxaa laga sameysaa da'aan oo 304, 316, 304 L, 316L. Sidoo kale waxaa lagu bixiyaa 1 × 7–7 iyo 1–7 iyo 1 × 19. Balalka caadiga ah waa 90 °. Gacmigu wax xumaado ma j...